Ny tombotsoa miaraka amin’Andriamanitra
9 décembre 201913 h 55 min
Manana tombotsoa lehibe ianao raha maheno ity teny zaraina ity eto androany. Jesosy mahita ny hetahetanao.
Tsy mitsitsy fotoana na vola na harena fa mbola eto mandrakariva mangetaheta ny fahamarinana.
Tia antsika Andriamanitra ary ny fiheviny tsy fihevitr’olombelona. Tsy hafaka ny hanao ny famindrapon’Andriamanitra ho kilalao isika na hametraka an’izany ho zava-maivana ka hahatonga olana eo amin’ny fiainan-tsika.
Mihoatra nohon’ny zavatra rehetra anefa dia misy tombony ny fiainana miaraka amin’Andriamanitra. Mahaliana anao ve zany teny izany? Manaraka anao indray androany hanaraka ny teny nozarain’i rahalahy Naivo
« Ny finoana an’Andriamanitra
Handova fitahiana »